Korona Feyras oo aan Waxba Ka Beddelin Farxadda Ciidda ee Soomaaliya - Tilmaan Media
Korona Feyras oo aan Waxba Ka Beddelin Farxadda Ciidda ee Soomaaliya
Dadka Soomaaliyeed ayaa Sabtidii si farxad iyo reyn-reyn ah ku soo dhaweyay ciidul-fitriga xilli uu dalku ka jiro xanuunka dunida oo idil ku baahay ee COVID 19.
Wasaaradda Owqaafta iyo Arrimaha Diinta Soomaaliya ayaa Jimcihii ku dhawaaqday in maalinta Sabtida ay tahay 1-da bisha Shawaal iyada oo shaacisay in dalka laga arkay bilshada bisha Shawaal, halka 18 dal oo Carbeed ay Sabtidii u ahayd maalinta 30-aad ee Ramadaan.
Masaajidda dalka oo idil ayay mar mura kawada bilaabatay Takbiirta oo si weyn loogu oogay salaadda ciidda halka dalalka islaamku badankood ay shucuubtooda ugu baaqeen in Salaadda Ciidda ay guryahooda ku tukadaan si aanu bulshadu ugu dhex faafin xanuunka Korona.
Kaddib gudashada salaadda ciidda carruurta Soomaaliyeed ayaa si raxan raxan ah ugu qulqulay goobaha ay carruurtu ku madadaashaan maalmaha farxadda, halka qaarka kalena ay u baqooleen qaraabo salaam iyo isu hambalyeyn ku aaddan munaasabbada qiimaha badan ee ciiddul-fitriga.
Madaxda dalka oo horay looga bartay in ay bulshada kula tukadaan fagaarayaasha iyo masaajidda waaweyn ayaanan sanadkan lagu arkin goobahaas tixgelinta farriimaha caafimaad awgood waxayna dhambaal hambalyo ku aaddan munaasabadda ciidda ay dadweynaha u soo marsiyeen dhanka warbaahinta.
Wallow wasaaradda caafimaadka ee dalka ay ku Talisay in ay bulshadu kala fogaadaan, hase yeeshee waxaa taladaasi daaqadda ka tuuray ciidda farxadda waxaana la arkayay bulshada oo isugu soo baxday goobaha loo nasiino tago sida maqaayadaha iyo hoteellada, iyaga oo xeero qura wada cunaya qoysaska iyo saaxiibbada.
Maalmihii ka horreeyay ciidda dadka Soomaaliyeed ayaa sidaa si la mid ah ugu xoonsanaa suuqyada waaweyn ee dalka oo ay ka dukaamaysanayeen si ay ugu diyaar garoobaan ciidda iyada oo aanay ka muuqanin walwalka ay dunida inteeda kale ka qabto xanuunka Korona Feyras.
Isha Warka: Halbeeg
Shiikh Shariif “ Qalabkii caafimaad ee COVID-19 loogu tala-galay ayaa suuqyada lagu iibinayaa”